Download WICShopper | JPMA, Inc.
Soo qaado WICShopper
WICShopper waxay fududeyneysaa WIC.
WICShopper waxay bixisaa qalab kaas oo WIC u fududayn doona inaad isticmaasho. Dhammaan hay'adaha ma taageersan yihiin ayna leeyihiin awoodo isku mid ah hubi inaad akhriso sharaxaadda dukaanka app!
Ku rakib WICShopper
Ka raadi WICShopper dukaanka app ama sawir midigta ku dheji.
Dooro WIC Wakaaladdaada
FADLAN! Akhri faahfaahinta dukaanka app si loo hubiyo in hay'addaadu taageerto kahor intaan rakibin app! Haddii aysan ahayn, waxaad noogu soo diri kartaa WICShopper@jpma.com si aad u ogaato haddii iyo marka hay'addaada la taageerayo.
Kaarkaaga ku qor
Fadlan ogow in aaney dhammaan hay'adaha diiwaangelinta kaararka!
WICShopper waxay taageertaa barnaamijyada WIC ee goboladan soo socda: Massachusetts, Florida, Iowa, Kentucky, W. Virginia, Texas, New Mexico, iyo Wyoming
Diiwaangelinta lambarka lambarka 16 ee hore ee kaarkaaga WIC EBT. Diiwaangelintu ma'aha suuro galka TX, NM, WY ama OH.
Markaad ku qorto kaarkaaga, adiga hadda macaashku si toos ah ayuu u soo gudbin doonaa app. Waan ka xumahay TX, WY iyo NM, tani macquul maaha goboladaada!
Ha arkin hay'addaada liiska ku qoran? Noo sheeg wax ku saabsan.